Maaskaro caafimaad Soosaarayaasha | Maaskarada Caafimaadka Shiinaha Warshad & Shirkado
Suufka suufka nuugaya
Suufka daryeelka bukaanka caafimaad
Cudbi aan dufan lahayn
Koofiyado caafimaad oo la tuuro
Maaskaro qalliin caafimaad
Maaskarada qalliinka caafimaadku waxay leeyihiin iska caabin yar oo hawo ah, carqalad dhiig ah oo isku dhafan, sifeynta walxaha yar yar iyo bakteeriyada, dib u dhaca ololka iyo astaamo kale; lagu bixiyo qaab nadiif ah iska caabbinta hawada wax ka yar 49 Pa, waxtarka sifaynta bakteeriyada oo ka badan 95. Wax soo saarku wuxuu ku habboon yahay ilaalinta aasaasiga ah ee shaqaalaha caafimaadka ama shaqaalaha la xiriira, iyo sidoo kale ka hortagga faafidda cudurrada, noolaha yaryar, dhiigga, dheecaannada jirka iyo kala firdhinta. inta lagu guda jiro duullaan ...
Maaskarada caafimaadka waxaa lagu bixiyaa qaab aseptic ah oo leh iska caabin yar oo hawo ah, carqalad dhiig ah oo isku dhafan, xoog gaar ah, waxtarka sifeynta, u adkeysiga qoyaanka dusha iyo ololka. Caabbinta socodka hawada waa wax ka yar 110 Pa, waxtarka sifeynta ee walxaha aan saliida lahayn waxay ka badan tahay 95, waxtarka sifaynta bakteeriyada waxay ka weyn tahay 95. Badeecadani waxay ku habboon tahay is-nuugid iyo sifeynta maadada walxaha ku jirta hawada, xannibaadda dhibcaha, dhiigga, dareeraha jidhka, dheecaanka, iwm.
Maaskarada caafimaadka ee aan tolmo wanaagsan lahayn oo la tuuro
Isticmaalka la tuuro ee maaskaro caafimaad oo aan tolmo wanaagsan lahayn oo leh astaamo yar-yar oo hawo-mareenka ah, oo leh hawo afka iyo sanka laga soo saaray ama wasakh la soo saaray iyo shaqooyinka kale ee gudbinta; lagu bixiyo qaab aseptic ah iska caabbinta qulqulka hawada oo ka yar 49 Pa, waxtarka sifaynta bakteeriyada oo ka weyn 95. Badeecadani waxay ku habboon tahay xirashada shaqaalaha caafimaadka ama shaqaalaha la xiriira ee caafimaadka guud. Shayga waxaa loo isticmaali karaa xarumaha caafimaadka, shaybaarada, ambalaaska, guryaha iyo wixii kale ...
Maaskarada ka-hortagga shaandhada is-hor-marinta ayaa leh hawsha shaandhaynta waxyaalaha aan saliida lahayn sida boodhka, qiiqa, ceeryaanta iyo noolaha; waxaa lagu bixiyaa qaab aan nadiif ahayn. Caabbinta hawadu waxay ka yartahay 110Pa, waxtarka sifaynta waxyaalaha aan saliida lahayn waxay ka badan tahay 95%, iyo waxtarka sifaynta bakteeriyada ayaa ka badan 95%. Badeecadani waxay ku habboon tahay is-xoqidda ilaalinta sifaynta waxyaalaha aan saliida lahayn sida boodhka, ceeryaanta aashitada, ceeryaanta rinjiga, noolaha iyo wixii la mid ah hawada ....
Suufka jeermiska looga dilaaco, Maaskaro Maaskaro Waji Caafimaad ah, Suufka Caafimaadka, Maaskaro ka hortagga fayraska, Suunka Kalkaalinta, Maaskarada Neefsashada,
Maya. 33-8, Shanyang Avenue, Aagga Horumarinta Dhaqaalaha, Degmada Huaian, Magaalada Huai'an